Mirairo inova "mbatata inopisa" kumakambani emachira muChina
Munguva pfupi yapfuura, nekuda kwekuwedzera kwemakesi akasimbiswa eCovid-19 muSoutheast Asia senge Vietnam, indasitiri yekugadzira inogona kudzoka kuChina. Zvimwe zviitiko zvinoratidzwa mukutengeserana, uye chokwadi chekuti kugadzirwa kwadzoka. Ongororo ichangoburwa yakaitwa ne Ministry of Commerce inoratidza kuti dzinosvika makumi mana muzana emakambani emabhizimusi ekunze 'achangosaina odha dzekunze dzawedzera gore-gore. Kudzoka kwemirairo yekukunze kwenyika kunounza mikana isingaenzaniswi yemabhizinesi madiki nepakati, uye panguva imwechete zvinounza matambudziko.
Maererano neongororo dzichangoburwa pamusika wemachira kuGuangdong, Jiangsu neZhejiang, uye mamwe makambani ekutengeserana ekunze, kuruka, machira, zvipfeko uye zvimwe zviteshi zvakagamuchira maodha zvakanaka kubva muna Chikunguru, uye ivo vakakwanisa kutanga kusvika anopfuura makumi masere muzana kana kunyatso kugadzirwa.
Makambani mazhinji akataura kuti kubva muna Chikunguru na Nyamavhuvhu, maodha akagamuchirwa munyika dzakasimukira senge Europe, America, Canada nedzimwe nyika dzakasimukira dzinonyanya kuve Kisimusi neIsita (kunyanya mirairo yekudzoka kubva kuSoutheast Asia iri pachena). Vakaiswa 2-3 mwedzi yapfuura kupfuura makore apfuura. Yakaderera-giredhi, murombo purofiti, asi -refu-kwenguva kurongeka uye nguva yekuendesa, kutengeserana kwekunze, machira uye zvipfeko mabhizinesi ane nguva yakaringana yekutenga zvigadzirwa zvakasvibirira, proofing, kugadzira uye kuendesa. Asi haazi ese maodha anogona kutengeswa mushe.
Mbishi zvigadzirwa zviri mudenga, maodha anova iyo "inopisa mbatatisi"
Nekuda kwekukanganiswa kwedenda, mazhinji maodha aifanira kumbosendekwa. Kuti vagadzirise zvakatsetseka, vaitofanira kupindira nevatengi, vachivimba kuti vachanzwisisa. Zvisinei, ivo vachiri kutarisana nekuremerwa nevatengi, uye vamwe havana sarudzo kunze kwekugamuchira vatengi kukanzura maodha nekuti havakwanise kuendesa zvinhu…
Mwaka weGoridhe Pfumbamwe uye Sirivheri Gumi iri kuuya munguva pfupi iri kutevera, makambani akafunga kuti kuchave nemirairo yakawanda kubva kune vatengi. Kunyange hazvo zvavakatarisana nazvo ndezvekuti chiratidziro chakanzurwa kana kumbomiswa, uye dzimwe nyika dzakadzivirirawo nyika dzavo nekuda kwedenda iri. Tsika dzenyika uko vatengi varipo dzakatangawo kunyatso kudzora zvigadzirwa zvakasiyana zvinounzwa kunze kwenyika. Kuunza uye kutengesa kunze kwenyika kwave kunetsa kwazvo. Izvi zvakakonzera kudonha kwakapinza mukutenga kwevatengi.
Zvinoenderana nemhinduro kubva kune vamwe vatengi vekunze: nekuda kwedenda, kugadzirwa kwenyika dzese kwakarohwa zvakanyanya, zvigadzirwa zvavo zvakawanda zvakatengeswa, uye kuwanda mune yekuchengetera kwasvika pakuderera, uye pane kudiwa kwekukurumidza yekutenga. Mamiriro ezvinhu azvino eSoutheast Asia nyika haafanire kutarisirwa pasi. Maodha ekumhiri kwemakungwa ari kuramba achidzoka, uye mamwe makambani eChina abva ku "odha kushomeka kuti aputse odha." Asi mukutarisana nekuwedzera kwemaodhita, machira vanhu havasi kufara! Nekuda kwekuwedzera kwemirairo, mutengo wemidziyo iri kuwedzerawo.
Uye mutengi haasi benzi. Kana mutengo ukangoerekana wawedzerwa, mutengi ane mukana wakanaka wekudzora kutenga kana kukanzura maodha. Kuti vararame, vanofanirwa kutora maodha pamutengo wepakutanga. Kune rimwe divi, kugoverwa kwezvinhu zvisina mbishi kwakwira, uye nekuda kwekuwedzera kwechimbichimbi kwekudiwa kwevatengi, kwavewo nekushomeka kwezvigadzirwa, izvo zvakatungamira kune vamwe vatengesi vangangotadza kupa zvikamu kufekitori. nenguva. Izvi zvakatungamira zvakananga kuchinhu chekuti mamwe machira mbishi zvinhu zvaisave munzvimbo uye zvaisakwanisika kuendeswa nenguva iyo fekitori yaigadzira.
Kuwedzeredza kugadzirwa kwekutakura, mafekitori nemakambani vakafunga kuti zvaizokwanisika kutumira zvakanaka, asi havana kutarisira kuti anotakura zvinhu ataure kuti zvinonetsa kuodha midziyo izvozvi. Kubva pakutanga kwekurongedzwa kwekutumirwa, hapana zvakatumirwa zvakabudirira mushure memwedzi. Kutumira kwakamanikana, uye mutengo wekutakura zvinhu mugungwa wakakwira, uye akati wandei zvakapetwa kanoverengeka, nekuti kukwira kwemakungwa kwakamira zvakare ... Zvinhu zvakapedzwa zvinongosiiwa mudura rekumirira, uye nenguva yekudzoserwa kwemari inowedzerwawo.